Articles de Ambohibary taggés "ambohibary" - Ambohibary, vohitra soa ! - Skyrock.com
7 articles taggés ambohibary
Rechercher tous les articles taggés ambohibary
Ny tantaran'ny vary.
Avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra vavy no nitondra ankoholahy sy akoho vavy ka ny akotry tao anaty takorobabon'ny Akoholahy no nangalana ny vary nambolena rehefa nanatody ny akohovavy.
AKOTRY no niantsoana ny vary taloha satria takorobabon'ny akoholahy no nangalana azy.
VARY kosa no niantsoana azy rehefa navoaka niharihary avy tao amin'ny takorobabon'akoho izy ka nambolena.
FOTSIMBARY indray rehefa nendahina ny hodiny, izany hoe nofotsiana tao an-daona (varifotsy na fotsimbary).
Ankehitriny dia roa no fiantso azy:
VARY AKOTRY (Vary avy amin'ny takorobabon'akoho).
FOTSIMBARY na VARY FOTSY (vary nendahina ny hodiny ho fotsiana).
Avy amin'io fihavian'ny vary sy ny akoho io no nahatonga ny vary ho foto-tsakafon'ny Malagasy ary ny akoho ho fanajana sy fanomezam-boninahitra ny Ray aman-dreny: ny fanateram-bodiakoho ho an'ny zokiolona sy ny Ray aman-dreny ary ny fen'akoho ho an'ny zaza.
Rehefa manam-bahiny na tonga ny Havana avy lavitra dia mamono akoho mariky ny fanajana amin'ny Malagasy (misy vavaka atao alohan'ny andidiana ny tendan'akoho).
Tantara, miendrika angano, notsongaina tao amin'ny tranokalan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatànana.
Nosoratan'i Randrianjatovo Henri sy Rakoto David avy ao amin'ny TRANO KOLTORALY MALAGASY
vary, fotsim-bary, ambohibary, fararano
# Posté le samedi 05 mars 2016 02:06
Modifié le dimanche 06 mars 2016 10:54
Tarika Ny any Aminay
An'isan'ny nanamarika ny faritra Ambohibary ny Tarika mpanao vakodrazana Ny Any Aminay. Ankafizo !
ba gasy, ny any aminay, vakodrazana, ambohibary
# Posté le vendredi 04 mars 2016 14:15
Kaominina ambanivohitra i Ambohibary. Tsy mena mitaha amin'ireo kaominina hafa manodidina anefa izy. Tsy mitokamonina izy fa lalovan'ny lalan-tany azo aleha mandavan-taona. Ahitana ireo foto-drafitra ilain'ny fivelarana sy ny fandrosoana rehetra izy : ao ny hopitaly CSBII, izay manana ny toerany tokoa satria dia manampy betsaka ny mponina amin'ny fitandroana ny fahasalam-bahoaka, ary indrindra koa ny fiterahana. Manampy azy ao koa ny tobim-panafody, izay ahitana ireo izay ilaina amin'ny akapobeny. Efa misy ihany koa ny toby vonji-taitran'ny zandarmaria (poste avancé de la gendarmerie), izay tena manampy betsaka tokoa amin'ny fandriam-pahaleman'ny Tanana. Ny fotodrafitr'asan'ny fampianarana moa dia mivelatra hatrany. Ao ny EPP izay efa saika manerana ny fokontany, ny CEG izay efa mahazaka mpianatra an-jatony. Fa tsy azo adinoina ihany koa ireo sekoly tsy miankina izay miroborobo tokoa, an'isan'izany ny LP Kanto. Manamaivana ny fahasahiranan'ny Ray amandReny tokoa izany, ny ankizy tsy mandeha kilometatra maro intsony raha hamonjy lisea. Taratra ankehitriny fa mitombo ny tahan'ny ankizy afaka bakalorea any Ambohibary raha tsy izany ny zavamisy tany amin'ny folo taona lasa. Ary ankehitriny dia mahavelom-bolo tokoa fa dia miha mitombo hatrany ireo ankizy manovo fianarana ambony eny amin'ny Anjery Manontolo sy ireo oniversité tsy miankina. Tsara ho marihina tokoa manko fa ny fianarana no tena lova tsara indrindra tsy mamitaka ny tena ary manome vahana ny fandrosoan'ny Tanana.
ambohibary, ny any aminay, ambanivohitra
Ny fararano sy ny vary ampamoaka.
Ny fararano dia ilay fotoam-pijinjana ny vary eny antsaha !
Tsy dia misy fotoana raikitra ny fararano fa miankina ny fahamasahan'ny vary eny antsaha. Manamarika izany ny fijinjana ny vary, ka ny lehilahy lehibe dia mijinja, ny vehivavy dia mifehy vary, ary ny zatovo sy ireo tanora dia milanja vary mankeny ampamoloana. Ny famoloana moa dia toerana iray natao hitobian'ny vary avy nojinjaina ka eo no atoby ny vary raha mbola mila ahotrika, ka avadika atonta izany, rehefa masaka kosa ny vary dia avy hatrany dia misy ekipa mively vary. Ny lehilahy matanjaka mively ny vary, ny vehivavy indray dia manitsana mololo, ary ny ankizy kosa dia mandeha manatoby mololo.
Tsy ho hadinoina amin'izany koa fa ny fararano dia fotoana fisakana trondro eny antanimbary ka dia diavolana éry ny ankizy misaka, tsy matahotra rano na koa irony dinta fa avy dia mandray anjara toa ny milalao, nefa mahazo ilaofana ny hariva. Fa ny tena manamarika ny fararano aty Ambohibary dia ny vary ampamoaka. Tena malaza izy io ary tena mampanembona tokoa moa izany. Ny Vary ampamoaka raha ny tena marina dia vary vao no ampiasaina aminy, ary vary somary mena no tena mety. Ny laoka amin'izany dia hen'omby somary matavy, miaraka amin'ny tsaramaso, ary asiana saosety izany. Atao rony izany rehetra izany ary aroso amin'ireo mpianakavy izay tena efa tsindrindaona éry hihinana vary ampamoaka, ary tsy adino amin'zany ny sakay tsilanindimbilahy eny amin'ny tsihy sy ny lambanana. hummm aoka fotsiny fa tena sakafo ampy sy matsiro tokoa raha ny vary ampamoaka ! Fotoanany izao ka asakasakao izay tsy hihinana vary ampamoaka amin'ty taona ity !
vary, vary ampamoaka, fararano, ambohibary, ny any aminay
# Posté le jeudi 03 mars 2016 14:40
Modifié le vendredi 11 mars 2016 04:08
Ny lemaka Ankenihenibe !
Ny lemaka Ankenihenibe dia lemaka iray midadasika, avy any antsinanana sy andrefana ary mitoraka mankany atsimo. Mamokatra tokoa izy satria dia kitro ifaharan'ny tantsaha amin'ny fambolena. Ny vary izay fototsakafon'ny Malagasy no vokarina amin'io lemaka io, ankehitriny anefa dia hita fa efa mivelatra ihany koa ny voly avotra (contre saison) : tsaramaso sy ny ovy no malaza amin'zany. Io voly vary eo Ankenihenibe io dia malaza indrindra rehefa fotoanan'ny fanetsana ary indrindra koa rehefa fararano ka dia faly ny mpianakavy fa tonga ny vary ampamoaka, ampiarahina amin'ny sakay tsy lanindimbilahy izy dia aoka fotsiny !!!!
ankenihenibe, vary, ambohibary, manjakandriana, ny any aminay
# Posté le jeudi 03 mars 2016 14:02
Modifié le jeudi 03 mars 2016 14:12
Ny any aminay Ambohibary !
Miarahaba antsika indray nahatratra izao taona 2016 izao !
"Ny any aminay Ambohibary", midika zavatra maro ho antsika avy any ambohibary izany tari-dresaka izany. Fahatsiarovana ny lasa, ny fahazazana, ary koa fanantenan'ny hoavy izany. Misokatra ho antsika avy amin'iny faritra iny ny tambatra ifampizarana (groupe) ao amin'ny tambajotran-tserasera Facebook. Manasà antsika ary hiditra ho isan'ny mpisera amin'zany. Ahafahanao mahalala vaovao mikasika ny tanana ao, mikasika ny namana, ary ifampizarana ihany koa ny soa sy ny tsara ho ahy sy ho anao ary indrindra ho an'ny tananantsika ! Koa tongavasoa àry ! :)
ambohibary, ny any aminay, vary, ambanivohitra